Sarontava azo arovana, saron-tava fiarovana KN95, fonon-tanana Nitrile - Sinnovation
Ny kitapo bopp dia mampiasa lamba voatenona polypropylene satria ny lambam-batana dia mety hahatonga ny fonosanao hankafy faharetana lehibe. Ny famolavolana samihafa toy ny (backseam, boribory, teboka ankihiben-tànana, perforation, pirinty anti-skid ary gussets sns) dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Araka ny endriny dia misy kitapo jumbo boribory, kitapo jumbo toradroa ary kitapo jumbo misy karazana U misy fehikibo ambony, na fibatana fiandrasana amina boribory na fantsom-piakarana ambany. Amin'ny ankapobeny dia misy spout miditra sy fivoahana miditra.
Paper poly bag1 Miorina amin'ny pp kitapo, izay antsoina koa hoe lamba amin'ny teny fohy, mamorona sarimihetsika sy taratasy amin'ny alàlan'ny fomba fanariana kasety. Izy io dia ampiasaina amin'ny famonosana karazana akora simika isan-karazany, toy ny akora vita amin'ny vovoka sy granular toy ny POM, ABS, polystyrene, poly-formaldehyde, polyvinyl chloride, styrene butadiene rubber, injeniera plastika ary andiana vovoka, akora granular sns.
Kitapo tenona PP, fantatra amin'ny anarana hoe kitapo bibilava, iray amin'ny plastika, dia ampiasaina amin'ny fonosana. Ny fitaovana lehibe indrindra dia polypropylene (PP). Natao izy io na dia nesorina aza, nivelatra ho kofehy kasety, nanenona sy nanao kitapo. Fampiasana: Ampiasaina be amin'ny famonosana karazana vovoka sy vovoka.
Sarontava azo arovana, fanadiovan-tanana
Masinina sarontava, saron-tava miaro KN95
Shining star plastic Co., Ltd. dia orinasa iraisam-pirenena hamokatra sy hivarotra vokatra plastika ary vokatra fonosana taratasy, mahatratra 100 hektara, ny sampana Vietnamianina dia mirefy 50 hektara, ny velarantanin'i Kambodza dia mirefy 50 hektara. Miaraka amin'ny milina fanaovana sary mandroso, boribory boribory, milina fanontam-pirinty, milina fanamainana, kitapo fanaovana kitapo, milina fanontam-pirinty, milina mitsoka horonantsary, tsipika famokarana granulator sns, tanjaka ara-teknika hahatrarana ny sehatra mandroso iraisam-pirenena. Ny ekipa dia manana ekipa hery ara-teknika an-jatony, miaraka amin'ny traikefa amin'ny famokarana sy fitantanana manankarena. Ny orinasa dia manana fitaovana fanandramana matihanina, ekipa mpanara-maso matihanina ary fitsipika sy fitsipiky ny fanaraha-maso henjana, ary amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO sy ny fanamarinana QS, ny kalitao dia nahatratra ny haavon'ny avo indrindra amin'ny indostria iray ihany. Hatramin'ny nananganana ny orinasa, "paikady voalohany, fahombiazan'ny orinasa, fitantanana mifantoka" filôzôfia momba ny fandraharahana, tsikelikely mba ho lasa orinasa sahala amin'i Shina amin'ny sehatry ny orinasa, manan-danja indrindra amin'ny orinasa indostrialy.